ဝချင်သောသူများ နှင့် ပိန်ချင်သောသူများ 1 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၀ချင်သောသူများ နှင့် ပိန်ချင်သောသူများ 1
၀ချင်သောသူများ နှင့် ပိန်ချင်သောသူများ 1
Posted by မမလေး on Sep 16, 2010 in News |3comments
၁၉၈၁ အောက်တိုဘာလ ဆရာဝန်တင်ရွှေ ( ဆမ ၁၆၃၀ ) ရဲ့ ၀သောသူများ ကိုယ်ရေစစ်၍ ပိန်သောသူများ ၀ဖြိုးလိုလျှင် ဆိုသော စာအုပ်မှ အဓိက အချက်လေးတွေချည်းပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရာသီဥတုပေါ်လိုက်ပြီး အလေးချိန်က ပြောင်းလဲတတ်သေးသည် ။ မိုးရွာထားချိန်နှင့် စိုစွတ်သော ရာသီဥတုများတွင် ခန္ဓာကိုယ်က ရေကိုစုပ်ယူ ထားသဖြင့် သာမန်အချိန်ထက် အလေးချိန် တစ်ပေါင် ၊ တစ်ပေါင်ခွဲ ပိုနေတတ်၏ ။ နေပူထဲထွက်ပြီး ဂေါက်သီး ရိုက်ခဲ့သော် တစ်နေ့တည်း သုံးပေါင် ကျသွားတတ်သည် ။ အားကစား လေ့ကျင့်သော်လည်းကောင်း ။ အလုပ်ကြမ်း လုပ်သော်လည်းကောင်း ၊ ကြွက်သားများ အားရှိလာပြီး ကြွက်သားများ တိုးတက်လာသော အလေးချိန်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် တိုးခြင်းဖြစ်သည် ။ တစ်ကယ်လို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူ မဟုတ်ပါက ယခုကဲ့သို့ တိုးလာသော အလေးချိန်သည် အဆီတတ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ ရုတ်တရတ် တိုးလာသော အလေးချိန်ထက် တရိပ်ရိပ် တိုးလာသော အလေးချိန်က ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ယောကျာ်း တစ်ယောက် ၀ လျှင် ခါးတွင် အဆီစု၏ ။
တစ်လက်မ အထူရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လက်မနှင့် လက်ညှိုးကိုင်ကြည့်ပါ ။ သင်၏ ၀မ်းဗိုက် ၊ ပေါင် ၊ ခါး ၊ ကျော တို့ကို လက်မနှင့် လက်ညှိုးကိုင်ကြည့်ပါ ။ တစ်လက်မ အထူရှိသော မိန်းမတစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတွင် စုစုပေါင်း အဆီဓါတ် ပေါင်လေးဆယ် ရှိသည် ။ တစ်လက်မ ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ တိုးလာလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီဓါတ် ဆယ်ပေါင် တိုးလာသည်ကို ဆိုလိုသည် ။
ပိန်လား ၊ ၀လား တိုင်းတာနည်း
ယောကျာ်းလေးဆိုရင် နောက်ကျော လက်ပြင်ရိုးအောက်မှ အရေပြားရှိ အဆီအထူ အပါးကို တိုင်း၏ ။ မိန်းကလေးဆိူရင် လက်မောင်းနောက်ဘက် အရေပြားရှိ အဆီအထူ အပါးကို တိုင်း၏ ။
အရပ်အမောင်း အလိုက် ရှိသင့်သော အလေးချိန် ( ယောကျာ်း ) သာမန် အ၀တ်အစား ၀တ်ဆင်လျှက် အသက် ၂၅ နှစ် အထက်
အရပ်အမောင်း ခန္ဓာကိုယ်သေးသူ ခန္ဓာကိုယ်အလတ်တန်း ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူ
5′2” 112 – 120 lb 118 – 129 lb 126-141 lb
5′ 3′ 115 – 123 lb 121 – 133 lb 129 – 144 lb
5′4” 118 – 126 lb 124 – 136 lb 131 – 148 lb
5′ 5″ 121 – 129 lb 127 – 139 lb 135 – 152 lb
5′ 6″ 124 – 132 lb 130 – 143 lb 138 – 156 lb
5′ 7″ 128 – 137 lb 134 – 147 lb 142 – 161 lb
5′ 8″ 132 – 141 lb 138 – 152 lb 147 – 166 lb
5′9” 136 – 145 lb 142 – 156 lb 151 – 169 lb
5′ 10″ 140 – 150 lb 146 – 160 lb 155 – 174 lb
5′ 11″ 144 – 154 lb 150 – 165 lb 159 – 179 lb
6′ 148 – 159 lb 154 – 170 lb 164 – 184 lb
6 ‘ 1″ 152 – 162 lb 156 – 175 lb 168 – 189 lb
6′ 2″ 156 – 167 lb 162 – 180 lb 173 -194 lb
အမျိုးသမီး ၂၅ နှစ်အထက်
4′ 10 ” 92-98 lb 96-107 lb 104-119lb
4′ 11″ 94-101lb 98-110lb 116-122lb
5′ 96-104lb 101-113lb 109-125lb
1″ +3 lb +3 lb +3 lb
2″ +3 lb +3 lb +3 lb
3″ +3 lb +3 lb +3 lb
4″ +3 lb +3 lb +3lb – +4lb
5″ +3 lb +3 lb +4 lb
6″ +3 lb +3 lb +4 lb
7″ +3 lb +3 lb +4 lb
8″ +4 lb +4lb +4 lb
9″ +4 lb +4lb +4lb
10″ 130-140 lb 136-151 lb 45-163 lb
11″ 134-144 lb 140-155 lb 149-168 lb
6′ 139-128 lb 144-159 lb 135-173 lb
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် နှင့် ခါး အရွယ်အစား ဆက်စပ်မှု
100 lb – 30 လက်မ
110 lb – 31 လက်မ
120 lb – 32 လက်မ
130 lb – 32 လက်မ
140 lb – 33 လက်မ
150 lb – 34 လက်မ
160 lb – 34 လက်မ
170 lb – 35 လက်မ
180 lb – 36 လက်မ
190 lb – 36 လက်မ
200 lb – 37 လက်မ
210 lb – 38 လက်မ
220 lb – 38 လက်မ
230 lb – 39 လက်မ
240 lb – 40 လက်မ
250 lb – 40 လက်မ
အဆီဓါတ် ပိုနေခြင်း ရှိ ၊ မရှိ
အသင့်အတင့် ၀ သူ ကျား 1.5 cm မှ2cm မ2cm – 2.5 cm
အတော်အတန် ၀ သူ2cm – 2.5 cm 2.5 cm –3cm
အလွန်အမင်း ၀ သူ 2.5 cm နှင့် အထက်3cm နှင့် အထက်
အထက်ဖော်ပြပါ ဇယားနှင့် ကွက်တိ မ၀င်သည့် တိုင်အောင် စိတ်ပျက်စရာမလိုပါ ။ မတူသည့် လူများ လည်းရှိတတ်သလို နည်းနေသောသူများလည်း ရှိတတ်ပါသည် ။ အလွန်အမင်း အလေးချိန် မတိုးအောင်တော့ ပြုလုပ်သင့်ပါသည် ။
စုစုပေါင်း စာမျက်နှာ 205 မျက်နှာရှိပါသည် ။ ခု ဖော်ပြလိုက်သည်မှာ 25 မျက်နှာသာ ရှိပါသေးတယ် ။ စိတ်ဝင်စားကြတယ် ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီး တော့ တစ်နေ့ နည်းနည်းစီ ဖော်ပြ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သိပြီးသားဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ . ရေးရသူလည်း လက်ညောင်း ပြီး အချိန်ကုန်တယ် ။ ဖတ်ရသူလည်း အကျိုးမရှိဘူးလေနော် . . .
ွှThanks for this new… pls present the other pages..:)
ဒီခေါင်းစဉ် တော့ မဟုတ်တော့ဘူး တစ်ခြားခေါင်းစဉ်နဲ့နော် သိလား . . .